Kuratidza zvinyorwa neelebheri chiteshi
Ndinogadzira sei chiteshi chitsva cheYouTube?
Gadzira chiteshi chitsva
NeAkhawunti yako yeGoogle, unogona kuona mavhidhiyo, semavhidhiyo, uye kunyorera kuzviteshi. Nekudaro, haugone kuita pachena mabasa paYouTube pasina YouTube kiteshi. Kana iwe uchida kurodha mavhidhiyo, kutumira mhinduro, kana kugadzira playlists, yako Akaunti yeGoogle haina kukwana, asi iwe unofanirwa kugadzira YouTube chiteshi. Iwe unogona kugadzira chiteshi chitsva pakombuta yako kana YouTube nharembozha
Gadzira chiteshi chako Tevedza nhanho idzi kugadzira chiteshi chega chaunobata neako Akaunti yeGoogle.
Saina kupinda muYouTube pakomputa yako kana nharembozha. Edza chero chiito chinoda chiteshi: kurodha vhidhiyo, wedzera chirevo, kana gadzira rwiyo rwekuridza. Kana iwe usati watova nechiteshi, unokurudzirwa kuigadzira. Tarisa uone ruzivo rwawakaisa (rine zita rako nepikicha pikicha kubva kuGoogle Akhawunti) uye simbisa kuumbwa kwechiteshi chitsva.
Gadzira chiteshi nebhizinesi kana rimwe zita Tevedza matanho ari pazasi kugadzira…